Yintoni ukuzinikela kwamakhasino ukuba abe iinkampani ezizinzileyo - ii-Geofumadas
Yintoni ukuzibophezela kwamakhasino ukuba abe ngamaqumrhu azinzileyo
Epreli, 2019 ezintsha
Ama-casino amaninzi afaka kwindlela abaninzi ngayo amazwe kwihlabathi namhlanje. Lo mkhuba awuyiyo ifowuni okanye imeko yesikhashana, ngokuchaseneyo, kuyimfuneko yokuba zonke iinkampani ezifuna ukuqhubeka nokuphuhlisa njengoshishino. Kubalulekile ukuba bonke abalingani kuluntu baqaphele ukubaluleka kokunyamekela indalo kunye nokuthatha inxaxheba ekuphuculeni imeko yabo bonke.
Namhlanje, ababhuki beenkampani ezifuna ukuhlangabezana nezilindelo zabathengi, kodwa ngokuzibophezela kokusebenza ngaphakathi kwinqanaba lomgangatho ophakanyiswe yimigangatho ephezulu, equka ukuthotyelwa komthetho okwangoku kwindawo nganye apho ba sebenza khona.
Ukugcinwa kwezono kunye noluntu
Uninzi lwamakhasino amakhulu sele aqalise ukusebenzisa amanyathelo obaluleke kakhulu iinkampani ezizinzileyo. Iimeko zeeKesars ze-Casin eLas Vegas ngumzekelo obalaseleyo wendlela inkampani enkulu inokutshintsha ngayo ukuphuhlisa amanyathelo angqinelanayo okwenza kube lukhuseleko kunye nobungqonge kwimeko. Ezi zikhasino ziye zasebenzisa ukuphathwa kweqhinga lekhabhoni kunye nomgaqo weCodeGreen owamisa ngokwawo ngonyaka we-2008.
Kwakhona, ezinye ii-casino ezinkulu zizinikele emandla elanga. IiCasto ziindawo ezisebenzisa umbane omkhulu, ngoko iiprojekthi eziphuhlisiwe ziphunyezwe yi-Wynn kunye neMGM Resort e Las Vegas ziyamangalisa kwaye zihlangabezana nepesenteji ezibalulekileyo zamandla amakhono anomfuneko.
Iikhosino ze-intanethi zifana I-NetBet, kunye nayo yonke imidlalo yendabuko kwimodareythi yayo kunye nezinto ezinokuzikhethela kwihlabathi lokubheja, nazo zidla amandla, kodwa kulo nyaka, iindleko zicingwa ngumsebenzisi ngekhompyutheni yakhe, ifowuni yakhe okanye nayiphi na ifowuni Ndiyayidlala.
IiCasino njengenkampani ezenzekileyo zihambelana nommandla, kwaye ezininzi zazo zithatha inxaxheba ebomini bentlalo ejikeleze ukuba iphucule. Ngokomzekelo, banikela ngemibutho kwimibutho engekho inzuzo kunye neenkxaso ezinceda amanye amacandelo oluntu okanye ukukhuthaza imfundo nemidlalo. Baphinde baxhasa imisebenzi yeenkcubeko kunye nabaxhasayo kwizikolo.
Ngakolunye uhlangothi, xa ii-casinos zenza amanyathelo amanyathelo okunyamekela imo-zendalo, zibeka ukunyusa ulwazi kuluntu kwaye zimema abamelwane ukuba bathathe amanyathelo afana nokubuyiswa kwakhona nokugcina amandla. Ngokuqinisekileyo, i-casinos iya kuqhubeka iguqulwa ibe yiinkampani zanamuhla ezisehlabathini elimele lizinyamekele.
Post edlulileyo«Edlulileyo Izinhlelo zokusebenza kwintsimi - i-AppStudio ye-ArcGIS
Post Next I-Leica Geosystems inikeza ithuluzi elitsha lokubamba idatha yezolimoOkulandelayo "